फाँटहरू सम्पादन गर्नुहोस्
तपाईँले फाँटको गुणहरू सम्पादन गर्न सक्ने संवाद खोल्छ। फाँटको अगाडि तिर क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि सो आदेश रोज्नुहोस्। संवादमा, तपाईँले अघिल्लो वा पछिल्लो फाँट सार्न तीर बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
फाँट सम्पादन गर्न खोल्दा तपाईँंको कागजातमा तपाईँंले फाँटलाई दोहोरो-क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ
रोज्नुहोस्सम्पादन - फाँटहरू
यदि तपाइँले कागजातमा डिडिइ लिङ्क चयन गर्नुभयो र त्यसपछि सम्पादन गर्नुहोस् - क्षेत्रहरु छनौट गर्नुभयो भने, लिंकहरू सम्पादन गर्नुहोस् भन्ने संवाद खुल्छ।
यदि तपाइँ "प्रेषक" प्रकार फिल्डको अगाडि क्लिक गर्नुहुन्छ भने, र त्यसपछि सम्पादन गर्नुहोस् - क्षेत्रहरु छनौट गर्नुभयो भने, प्रयोगकर्ता डेटा भन्ने संवाद खुल्छ।
तपाईँंले सम्पादन गरिरहनु भएको फाँटको प्रकारको सूची गर्नुहोस्.
तलको संवाद तत्वहरू तब मात्र दृश्यात्मक हुन्छ जब अनुकूल फाँट प्रकार रोज्नुहोस् गरिन्छ.
फाँट विकल्प सूची गराउनुहोस्, उदाहरणका लागि, "fixed". यदि तपाईँं चाहनुहुन्छ भने, रोज्नुहोस् गरिएको फाँट प्रकारका लागि तपाईँं अरू विकल्प क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ.
फाँटको सामाग्रीका लागि ढाँचा रोज्नुहोस् गर्नुहोस्. मिति, समय, र प्रयोगकर्ता-परिभाषित फाँटहरूका लागि, तपाईँंले "Additional formats" पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सूचीमा, र त्यसपछि बिभिन्न ढाँचा रोज्नुहोस् गर्नुहोस्. ढाँचा जुन उपलब्ध छन् तपाईँंले सम्पादन गर्नु भएको फाँटको प्रकारमा भर पर्दछ..
रोज्नुहोस् गरिएको फाँटको प्रकारका लागि अफसेट प्रदर्शन गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, "Next Page," "Page Numbers" or "Previous Page". यदि तपाईँं चाहनुहुन्छ भने, तपाईँं नयाँ अफसेट मान राख्न सक्नुहुन्छ.
यदि तपाईँं खास पृष्ठ सङ्ख्या परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ तर प्रदर्शित सङ्ख्या होइन भने, अफसेट मान प्रयोग नगर्नुहोस्। पृष्ठ सङ्ख्याहरू परिवर्तन गर्न, पृष्ठ सङ्ख्याहरू मार्गदर्शक पढ्नुहोस।
परिभाषित मानहरू र रूपरेखा तहहरू "Chapter" फाँट प्रकारका लागि परिवर्तन गर्नुहोस्.
फाँट चलको नाम प्रदर्शन ग्नुहोस्. यदि तपाईँं चाहनुहुन्छ भने, तपाईँं नयाँ नाम राख्न सक्नु हुन्छ.
फाँट चलका लागि हालको मान प्रदर्शन गर्नुहोस्. यदि तपाईँं चाहनुहुन्छ भने, तपाईँं नयाँ मान राख्न सक्नुहुन्छ.
फाँट स्थित सामग्रीको रूपमा घुसाउछ, जुन चाँही, फाँट अद्यावधिक गर्न सकिँदैन।
अवस्था प्रदर्शन गर्नुहोस् जसले फाँट सक्रिय हुनका लागि पुग हुन्छ. यदि. यदि तपाईँं चाहनुहुन्छ भने, तपाईँं नयाँ अवस्था राख्न सक्नुहुन्छ.
फाँट सामाग्रीहरू परिवर्तन गर्नुहोस् जुन प्रदर्शन रहेको छ कि त फाँट अवस्था पुग हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा भर पर्दछ.
रोज्नुहोस् गरिएको फाँटका लागि पाठ सन्दर्भ घुसाउनुहोस् वा परिमार्जन गर्नुहोस्.
रोज्नुहोस् गरिएको फाँट सँग सम्बन्धित म्याक्रोको नाम प्रदर्शन गर्नुहोस्.
रोज्नुहोस् गरिएको स्थानहोल्डर पाठ प्रदर्शन गर्नुहोस्
पाठ प्रदर्शन गर्नुहोस् जुन अवस्था सँग सम्बन्धित छ
सूत्र फाँटको सूत्र प्रदर्शन गर्नुहोस्
रेजिस्टर गरिएको डाटाबेस रोज्नुहोस् गर्नुहोस् जुन तपाईँं रोज्नुहोस् गरिएको फाँटबाट घुसाउन चाहनुहुन्छ. रोज्नुहोस् गरिएको फिलड सँग सम्बन्धित तालिका वा क्वेरी पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
डाटाबेस रेकर्ड सङ्ख्या प्रदर्शन गर्नुहोस् जुन "Any record" फाँट प्रकार पुग भएको बेलामा घुसाइएको छ
कागजातको उस्तै प्रकारको अघिल्लो फाँटमा जान्छ । उस्तै प्रकारको एक फाँट भन्दा बढी फाँट समावेश गर्दा मात्र सो बटन सक्रिय हुन्छ ।
कागजातमा उस्तै प्रकारको पछिल्लो फाँटमा जान्छ । उस्तै प्रकारको एक भन्दा बढी फाँटहरू समावेश गर्दा मात्र सो बटन सक्रिय हुन्छ ।
Title is: फाँटहरू सम्पादन गर्नुहोस्